Ciidammada Puntland oo ka qabsaday Qandala
Home WARARKA Ciidammada Puntland oo ka qabsaday Qandala
Qandala(Berberanews):-Ciidammada Maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, ayaa maanta la wareegay gacan-ku-haynta magaalada Qandala oo ka tirsan gobolka Bari, ka dib markii maalmihii u dambeeyey ay deegaankaas iyo deegaanno ku dhaw kula dagaallamayeen Malleeshiyaad Taabacsan Ururka Daacish oo muddo ku dhaw 40 Cisho haystay magaaladaas.
Weerarka lagu qabsaday magaalada Qandala, ayaa ahaa laba dhinac oo ay Ciidammada Puntland ka soo weerareen magaaladaas, iyagoo ka soo galay dhinacyada Badda iyo Dhulka, iyagoo Barqadiina si buuxda ula wareegay gacan-ku-haynta magaaladaas oo ay gudaha u galeen, ka dib markii ay ka baxeen Malleeshiyaadka taabacsan kooxda la baxday dawladda Islaamiga ah ee ka dagaallanta qaybo ka mid ah waddamada Suuriya iyo Ciraaq ee Daacish ama ISIS.
Weriyaha Laanta Afka Soomaaliga ee Idaacadda VOA Faadumo Yaasiin Jaamac oo ka mid ahayd Weriyeyaal tegay magaalada Daacish laga qabsaday ee Qandala, ayaa ku warrantay inaanay magaaladaas ku arag Dad Shacab ah oo ku sugan.
Ciidammada Puntland, ayaa deegaannadaa kooxda Daacish ka tirsan kula dagaallamayey maalmihii Sabtidii iyo Isniintii ee toddobaadkan, hase-yeeshee wax iska caabbin ah maanta kalamay kulmin Ciidammada Puntland qabsashada magaaladaas, ka dib markii ay Malleeshiyada Daacish ee haysatay iskaga baxeen markii Ciidanka Puntland weeraray Subaxnimadii hore ee Arbacada.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Puntland Dr. Shire Xaaji Faarah oo ka mid ah Masuuliyiin magaalada Qandala gaadhay markii Ciidammada la wareegeen, ayaa u warramay Weriyaha VOA-da, isagoo ka sheekeeyey qaabka loo qabsaday magaalada, sida Koxoda loola dagaallamay iyo qorshohooda Maamul ahaan qabsashadan xiga.
Previous articleToban Arrimood oo Fidel Castro u Galay Diiwaanka Taariikhda Afrika
Next articleWasiirkii hore ee Biyaha oo ka hadlay Xil-ka-qaadistiisa